Xaalada Degmada Balcad | KEYDMEDIA ONLINE
Xaalada Degmada Balcad
MUQDISHO (Keydmedia) - Waxaa saakay Xaalad deganaansho ah laga dareemayaa Degmada Balacad iyo dhamaan Deegaanadda hoostaga oo ay shalay la wareegeen Ciidamada dowladda KMG iyo kuwa AMISOM.
Qaar ka tirsan Dadka ku nool Degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha hoose oo aan Saakay la xariirnay ayaa inoo sheegay inay xalay ku baryeen Nabadda, islamarkaana ay Xaaladdu tahay mid deggan oo aysan jirin wax Dhibaato ah oo ka dhacday gudaha degmadaasi 24-Saac ee ugu danbaysay.
Sidoo kale Saraakiisha Dowladda ayaa sheegay inay wadaan Howlgallo Baaritaanno ah oo lagu xaqiijinayo Ammaanka Balcad, iyagoo shaaca ka qaaday inay ku wajanyihiin Magaalada Jowhar ee Xaruunta Gobolka Sh/dhexe.
Ciidamada ayaa la sheegay inay gaaf waregayaan Gudaha iyo Daafaha Xaafadaha ku yaalla Degmada Balcad oo qiyaastii 37 Km dhinaca Waqooyi Barri kaga beegan Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in ganacsiga uu saaka caadi ku soo noqday, iyadoo dadkii shalay magaalada isaga cararay ay billaabeen in ay dib ugu soo noqdaan.
Al Shabaab wali kama hadlin Guulihii ay gaareen Ciidamada dowladda KMG iyo AMISOM, hase ahaatee Muddooyinkii dambe waxa ay la kulmayeen Dharbaaxooyin Militeri oo xoggan, waxaana lagala wareegayay Degmooyin iyo Deegaanno badan oo muhiim ah islamarkaana ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.